Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Illay .. Xarunta dhexe natus? Hebel .. Geedkan hoostiisa ayaan ku ogaa .. Qore/Cabdulaahi Xuseen.
Posted by ONA Admin	/ March 5, 2013
Kooxdaasi kahor intii ayna xukunka Itoobiya la wareegin mudo dheer ayay jabhadnimo ku dagaalami jireen ugu danbayntiina fursado ay heleen ayaa u saamaxday inay kalitaliskii dhargiga xukunka kala wareegaan. Markay la wareegeen xukunka waxa ay ka fursan wayday in ay dajiyaan qorshe ay ku guumaysan karaan qowmiyadihii ka tirada badnaa ilaa hadana qorshihii ay wakhtigaas maleegeen ayay ku taaganyihiin inkastoo ay marba marka ka danbaysa sii casriyeeyaan.
Inkastoo aanan halkan kusoo wada koobi karin qorshayaashii kala duwanaa ee ay adeegsanayeen, hadana waxaan jeclaystay inaan akhristayaasha lawadaago qorshayaashii ugu danbeeyay ee ay soo saareen mid kamid ah iyadoo uu qorshahaasi yahay mid ay curiyeen kadib markii ay awoodoodii oo dhan u isticmaaleen ladagaalanka dhalinyarada naftood hurayaasha ah ee ONLF, balse ay ku guuldaraysteen.